Bayern Munich Iyo Borussia Dortmund Oo Diyaar U Ah Inay Ku Biiraan Tartanka Loogu Jiro Xiddiga Chelsea Armando Broja
HomeWararka CiyaarahaBayern Munich iyo Borussia Dortmund oo diyaar u ah inay ku biiraan tartanka loogu jiro xiddiga Chelsea Armando Broja
February 16, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Suuqa kala iibsiga 0
Weeraryahanka Chelsea Armando Broja ayaa lagu soo waramayaa inuu u muuqday mid bartilmaameed u ah Bayern Munich iyo Borussia Dortmund .
Isagoo wacdaro dhigay intii lagu jiray amaah uu ku joogay Southampton xilli ciyaareedkan, xiddiga heerka caalami ee dalka Albania ayaa haatan loo arkaa mid ka mid ah rajada loogu doonista badan yahay kubada cagta Yurub.
Kooxo badan oo ka tirsan Premier League, oo ay ku jiraan Saints iyo Newcastle United , ayaa lala xiriiriyay qaabka mustaqbalka ee 20 jirkaan.
Sida laga soo xigtay The Sun , Bayern iyo Dortmund ayaa sidoo kale laga yaabaa inay tijaabiyaan nasiibkooda xagaaga iyagoo isku diyaarinaya inay helaan bedelka Robert Lewandowski iyo Erling Braut Haaland .
Si kastaba ha ahaatee, warbixinta ayaa intaa ku dartay in Chelsea aysan u badneyn inay lacag kaash ah ku hesho Broja, kaasoo hadda loo saadaalinayo inuu boos ka heli karo kooxda koowaad ee Stamford Bridge xilli ciyaareedka soo socda.
Broja ayaa sidoo kale in ka badan afar sano uga hartay qandaraaskiisa Galbeedka London, labada dhinac midkoodna kuma degdegi doono inuu xiriirka u jaro.